विवाह सम्बन्धः तर, यस्तो शव्दको प्रयोग कहिल्यै नगर्नुस् - Nepal Page Nepal Page
हरेक सम्वन्ध विश्वासमा अडिएको हुन्छ । झैन पतिपत्नीको केही यस्ता कुरा पनि हुन्छन् जसले सम्बन्ध टुट्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। एउटा सानो गलतिले मनमुटाब हुने गर्छ । यस्तो हुन्नदिन एकअर्कामा समझदारिता कायम गर्न अति आवश्कता छ ।
पतिपत्नीबीच नोकझोक चल्नु सामान्य नै हो। तर कहिलेकाहिँ सानो कुरा पनि ठूलो बन्छ। सम्बन्ध टुट्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यो समयमा पनि रिस भरिएका शव्दको प्रयोग कहिल्यै नगर्नुस्। आउनुस् यी ​सेक्रेट जानकारी थाहा पाउनुस् जसले तपाई सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सिकाउँछ ।
१. बिजी​का कारण पार्टनरलाई धेरै समय दिन सकिँदैन। जब तपाईँ पार्टनरसँग नजिक पुग्ने कोशिस गर्नुहुन्छ त्यतिखेर उनको नजरमा तपाईँ ​सेल्फिस भइसक्नु हुन्छ।​ यो अवस्थामा समस्याको हल चाहनुहुन्छ भने रिस भरिएका शव्दको प्रयोग कहिल्यै नगर्नुस्।
२. विवाहपछि जोडीबीच ससाना कुरामा ठाक-ठुक पर्नु ठूलो कुरा होइन। तर कुनै बेला यसले झगडाको रुप लिन सक्छ। र कोही यस्ता हुन्छन् जो विवाहलाई जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो भूल ठान्न लाग्छन्। झगडामा पार्टनरसँग यस्तो कुरा नगर्नुस्। किनकि यस्तो कुराले तपाईँको पार्टनरको मनमा घोच्न सक्छ।
३. अक्सर मान्छे विवाहपछि पनि पार्टनरभन्दा जागिरलाई प्राथमिकता दिन्छन्।‍‍ उनीहरु सोच्छन् मेरो व्यस्तता पार्टनरले सम्झिदिउन्। तपाईँ आफ्नो काम सँगसँगै पार्टनरलाई पनि सम्झन कोशिष गर्नुस्। उनलाई पनि समय दिनुस्। तर समय छैन भनेर कहिल्यै नझर्किनुस्।
४. मान्छे लडाइँझगडामा एकअर्काका बुवाआमालाई अपशव्दले गालीगलौज गर्न थाल्छन्। यस्तो गर्नु ठीक होइन। यसले सम्बन्धमा चिसोपन मात्र ल्याउँदैन, टुट्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ।
हिन्दू धर्मशास्त्रमा मन भगवानमा मात्र लगाउन गरिने उपवासका बेला भोजन र यौन दुबै सोच्नै नहुने
अर्बपति बिल गेट्सः कस्तो लगाउँछन् ‘मास्क’ ?
एजेन्सी – कोरोना महामारीले विश्वभर मास्कको प्रयोग अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ । नाकमुख छोप्ने मास्क
पुनर्जीवन पाएका पत्रकार: एकै हातका भरमा चलेको पत्रकारिता
काठमाडौं २९ साउन । “भगीरथ, एउटा समाचार टिप त”, “भगीरथ, एउटा न्युज दिनू न,” इलामका
अब बिबाहका लागि अनिवार्य परीक्षा, फेल भए बिबाह रद्ध
काठमाडौं २८ साउन । इन्डोनेसियाको सरकारले विवाह पूर्व पढाई अनी परीक्षा शुरू गर्न लागिरहेको छ
जुनसुकै लतबाट छुटकारा पाउन एउटै उपाय !
काठमाडौं, २८ साउन । एउटा यस्तो उपाय छ जसले कुनै पनि नशाको लत छुटाउन मद्दत